Shuruucda iyo Dastuurka - Ururka Xarumaha Xarumaha Qorista
Xeerarka Ururka waxaa lagu heli karaa adigoo gujinaya Xeerarka Ururka Xarumaha Qorista Caalamiga ah.
Dastuurka Ururada waa la heli karaa adigoo gujinaya Dastuurka Ururka Xarumaha Qoraalka Caalamiga ah.
Qodobka XNUMXaad: Magaca iyo Ujeeddada
Qaybta 1: Magaca ururku wuxuu noqon doonaa Ururka Xarumaha Xarumaha Qorista, wixii hadda ka dambeeya loo yaqaan IWCA.
Qeybta 2: Iskuduwaha Golaha Qaranka ee Macallimiinta Ingiriisiga (NCTE), IWCA waxay taageertaa oo ay dhiirrigelisaa deeqda waxbarasho iyo horumarinta xirfadeed ee xarumaha qorista siyaabaha soo socda: 1) kafaala qaadka dhacdooyinka iyo shirarka; 2) deeq waxbarasho iyo cilmi baaris; 3) kor loo qaado muuqaalka xirfadeed ee xarumaha wax lagu qoro.
Qodobka II: Xubinnimada
Qaybta 1: Xubinnimadu waxay u furan tahay shaqsi kasta oo bixiya ajuurada.
Qeybta 2: Qaab dhismeedka Cunnada waxaa lagu dejin doonaa Shuruucda.
Qodobka III: Maamulka: Saraakiisha
Qeybta 1: Saraakiisha waxay noqon doonaan Madaxweynihii hore, Madaxweynaha, Madaxweyne kuxigeenka (oo noqonaya Madaxweyne iyo Madaxweynihii hore lix sano oo isku xigta), Khasnaji, iyo Xoghaye.
Qeybta 2: Saraakiisha waxaa loo dooran doonaa sida ku cad Qodobka VIII.
Qaybta 3: Shuruudaha xafiiska waa inay bilaabaan isla markiiba ka dib Shirweynihii Sannadlaha ahaa ee NCTE ee doorashada xigay, illaa muddadu buuxiso boos bannaan (fiiri Qodobka VIII).
Qaybta 4: Shuruudaha xafiiska Madaxweyne ku-Xigeenka-Madaxweyne-Madaxweynihii hore ee dhaxlay waxay noqon doontaa laba sano xafiis kasta, oo aan dib loo cusbooneysiin karin.
Qaybta 5: Shuruudaha xafiiska ee Xoghayaha iyo Khasnajiga waxay noqon doonaan laba sano, dib loo cusbooneysiin karo.
Qeybta 6: Saraakiisha waa inay joogteeyaan xubinimada IWCA iyo NCTE inta lagu jiro mudada xafiiska.
Qeybta 7: Waajibaadka Saraakiisha oo dhan waxay noqon doonaan kuwa lagu dejiyay Shuruucda.
Qeybta 8: Sarkaalka la soo doortay waxaa laga saari karaa xafiiska sababo ku filan ka dib markii la isku raaco Saraakiisha kale iyo seddex meelood laba meel Guddiga.
Qodobka IV: Maamulka: Guddi
Qeybta 1: Guddigu wuxuu cayminayaa matalaad ballaaran oo xubinnimada ah oo ay ku jiraan Wakiilo Gobol, Mid ballaaran, iyo Degmooyin Gaar ah. Wakiillada gobolka ayaa la magacaabaa (eeg Qeybta 3); At Wakiilada Deegaanada Waaweyn iyo Gaarka ah waxaa lagu doortaa sida ku qeexan Xeer hoosaadka.
Qeybta 2: Muddooyinka xubnaha Guddiga la doortay waa inay ahaadaan laba sano, dib loo cusbooneysiin karo. Shuruudaha waa in laga gaabiyo; si loo sameeyo dhicis, dhererka muddada ayaa si ku meelgaar ah loogu hagaajin karaa sida ku xusan Xeer hoosaadka.
Qaybta 3: Xulafooyinka gobolku waxay xaq u leeyihiin inay magacaabaan ama doortaan guddiga hal wakiil oo ka socda gobolkooda.
Qaybta 4: Madaxweynuhu wuxuu magacaabi doonaa xubnaha Gudiga aan codka lahayn ee ka socda ururada is kaabaya sida ku xusan Bylaws.
Qeybta 5: Xubnaha guddiga waa inay ilaaliyaan xubinnimada IWCA inta lagu jiro muddada xafiiska.
Qeybta 6: Waajibaadka dhammaan xubnaha Guddiga, la doortay ama la magacaabay, waxaa lagu dejiyey Xeer-hoosaadyada.
Qeybta 7: Xubin Golaha la doorto ama la magacaabay waa laga qaadi karaa xafiiska sababa ku filan ka dib markii la isku raaco saraakiisha iyo codka seddex meelood labo meel Guddiga.
Qodobka V: Maamulka: Guddiyada iyo Kooxaha Shaqada
Qeybta 1: Guddiyada joogtada ah waxaa lagu magacaabi doonaa Shuruucda.
Qaybta 2: Guddi-hoosaadyada, xoogagga hawsha, iyo kooxaha kale ee shaqeeya waxaa hawlgelin doona Madaxweynaha, oo ay dejin doonaan oo ay dacweyn doonaan Saraakiisha.
Qodobka VI: Kulamada iyo Dhacdooyinka
Qeybta 1: Hogaanka Guddiga Shirarka, IWCA waxay si joogto ah u kafaala qaadi doontaa dhacdooyinka horumarinta xirfadeed sida ku qeexan Shuruucda.
Qeybta 2: Marti-geliyaasha munaasabadda waxaa xaqiijinaya Guddiga oo lagu xushay habraacyada lagu tilmaamay Qawaaniinta; xiriirka ka dhexeeya martigaliyayaasha iyo IWCA waa in lagu faahfaahiyo Bylaws.
Qeybta 3: Shirka Guud ee xubinnimada wuxuu ka dhici doonaa Shirarka IWCA. Ilaa intii suurtagal ah, IWCA waxay sidoo kale shirar furan ku qaban doontaa CCCC iyo NCTE. Kulamada kale ee guud waxaa lagu qaban karaa go'aanka Guddiga.
Qaybta 4: Guddigu wuxuu la kulmi doonaa bishiiba mar haddii ay suurtagal tahay laakiin aan ka yareyn laba jeer sanadkiiba; Kooramka waxaa lagu qeexi doonaa inta badan xubnaha Guddiga, oo ay ku jiraan ugu yaraan saddex sarkaal.
Qodobka VII: Codbixinta
Qeybta 1: Dhammaan xubnaha shaqsiyaadka waxay xaq u leeyihiin inay u codeeyaan Saraakiisha, xubnaha Guddiga la doortay, iyo wax ka beddelka dastuurka. Marka laga reebo sida gaarka ah loogu sheegay meelo kale oo ka mid ah Dastuurka ama Shuruucda, aqlabiyad fudud oo codadka sharciga ah ee la dhiibtay ayaa looga baahan doonaa ficil.
Qeybta 2: Nidaamka codeynta waxaa lagu qeexi doonaa Xeer-hoosaadyada.
Qodobka VIII: Magacyada, Doorashooyinka, iyo Bannaanooyinka
Qeybta 1: Xoghayuhu wuxuu ku baaqi doonaa magacaabis; musharrixiinta ayaa magacaabi kara naftooda, ama xubin kasta oo ka mid ah ayaa soo magacaabi karta xubin kale oo oggolaata in la magacaabo. Dedaal ayaa loo samayn doonaa si loo hubiyo in cod-bixiyayaashu ay kala dooran karaan ugu yaraan saddex musharrax jago kasta.
Qaybta 2: Si aad xaq ugu yeelatid, musharrixiinta waa inay noqdaan xubno ka tirsan IWCA oo xaalad wanaagsan ku sugan.
Qeybta 3: Jadwalka doorashooyinka waxaa lagu qeexi doonaa Xeer hoosaadyada.
Qaybta 4: Haddii xafiiska Madaxweynuhu bannaanaado ka hor muddada, Madaxweynihii hore wuxuu buuxin doonaa doorka illaa laga gaadhayo doorashada sanadlaha ah ee soo socota oo Madaxweyne Ku-xigeen cusub la dooran karo. Isbeddelka sanadlaha ah ee saraakiisha, Madaxweyne ku-xigeenka fadhiya ayaa la wareegi doona Madaxtooyada, Madaxweynihii horena wuxuu dhammaystiri doonaa Madaxtooyadii hore ama xafiiska wuu bannaanaan doonaa (eeg Qaybta 5).
Qeybta 5: Haddii boos kale oo Sarkaal uu bannaanaado ka hor muddada, Saraakiisha haray waxay sameyn doonaan ballan ku meel gaar ah oo dhaqan gal ah illaa laga gaaro doorashada sanadlaha ah ee soo socota.
Qaybta 6: Haddii jagooyinka wakiillada ee gobolku bannaanaadaan ka hor muddada, madaxweynaha gobolka ku xiran waxaa laga codsan doonaa inuu magacaabo wakiil cusub.
Qodobka IX: Ururada Xarumaha Qorista ee Gobollada
Qeybta 1: IWCA waxay u aqoonsan tahay inay xiriir la leedahay ururada xarumaha qoraalka ee ku taxan Sharciyada.
Qeybta 2: Shirkadaha ku xiran ayaa laga yaabaa inay ka tanaasulaan xaaladda xiriirkooda waqti kasta.
Qaybta 3: Gobollada cusub ee codsada xaaladda ku-xirnaanta waxaa lagu oggolaaday cod aqlabiyad ah ee Guddiga; habka codsiga iyo shuruudaha waxaa lagu qeexay Xeer Hoosaadka.
Qaybta 4: Dhammaan xulafada gobolka waxay xaq u leeyihiin inay magacaabaan ama doortaan Guddiga hal wakiil oo ka socda gobolkooda.
Qaybta 5: Gobollada xaaladdoodu wanaagsan tahay ee muujiya baahida waxay u codsan karaan IWCA deeqo ama taageero kale oo loogu talagalay waxqabadyada gobolka sida ku xusan Shuruucda.
Qodobka X: Daabacadaha
Qeybta 1: Xarunta Wax Qorista waa daabacaada rasmiga ah ee IWCA; kooxda tifaftirka waxaa soo xulay oo la shaqeynaya Guddiga sida waafaqsan nidaamka lagu qeexay Bylaws.
Qeybta 2: Qorista Warsidaha Shaybaarka waa daabacaad xiriir la leh IWCA; kooxda tifaftirka waxay lashaqeeyaan guddiga sida waafaqsan nidaamka ku xusan Xeer hoosaadka.
Qodobka XI: Dhaqaalaha iyo Xiriirka Maaliyadeed
Qaybta 1: Ilaha dakhliga ee ugu muhiimsan waxaa ka mid ah khidmadaha xubinnimada iyo dakhliga ka soo gala dhacdooyinka ay maalgeliso IWCA sida lagu faahfaahiyay Bylaws.
Qeybta 2: Dhammaan Saraakiisha waxaa loo oggol yahay inay saxiixaan qandaraasyada maaliyadeed iyo inay dib u soo celiyaan kharashyada iyaga oo ka wakiil ah hay'adda iyadoo la raacayo shuruudaha ku xusan Xeerka.
Qaybta 3: Dhammaan dakhliyada iyo kharashaadka waxaa la xisaabtami doona oo soo sheegi doonaa Khasnajiga iyadoo la raacayo dhammaan qawaaniinta IRS ee khuseeya xaaladda aan macaash doonka ahayn.
Qaybta 4: Haddii ururku kala baxo, Saraakiisha waxay kormeeri doonaan qaybinta hantida iyadoo la raacayo xeerarka IRS (eeg Qodobka XIII, Qeybta 5).
Qodobka XII: Dastuurka iyo Shuruucda
Qaybta 1: IWCA waa inay ansaxiso oo ay ilaaliso Dastuur qeexaya mabaadi'da ururka iyo xirmo-hoosaadyo qeexaya habraacyada fulinta.
Qaybta 2: Wax-ka-beddelka Dastuurka ama Shuruucda waxaa soo jeedin kara 1) Guddiga; 2) saddex meelood laba meelood meel xubnaha ka qayb galaya Shirka Guud ee IWCA; ama 3) codsiyo ay saxeexeen labaatan xubnood oo loo gudbiyey Madaxweynaha.
Qeybta 3: Isbedelada lagu sameynayo dastuurka waxaa lagu meel mariyay aqlabiyadda saddex meelood meel codadka sharciga ah ee xubintu dhiibato.
Qaybta 4: Ansixinta iyo wax ka beddelka Shuruucda waxaa lagu soo rogay aqlabiyadda saddex meelood meel ee Golaha.
Qaybta 5: Nidaamka codbixinta waxaa ku xusan Qodobka VII.
Qodobka XIII: Shuruucda IRS ee Joogtaynta Xaaladda Cafiska Cafis
IWCA iyo la-hawlgalayaasheedu waa inay u hoggaansamaan shuruudaha laga dhaafayo Urur lagu sharxay qaybta 501 (c) (3) ee Xeerka Dakhliga Gudaha:
Qeybta 1: Ururka la yiraahdo waxaa loo abaabulaa si khaas ah sadaqooyinka, diinta, waxbarashada, ama ujeedooyinka sayniska, oo ay ku jiraan, ujeeddooyinkaas oo kale, sameynta qaybinta hay'adaha u qalma sida ku cad qaybta 501 (c) (3) ee Xeerka Dakhliga Gudaha, ama qaybta u dhiganta ee lambar kasta oo cashuurta federaalka ah ee mustaqbalka.
Qeybta 2: Qeyb ka mid ah dakhliga saafiga ah ee ururku kama faa'iideysan karo, ama looma qeybin karo xubnaheeda, amaano yaasha, saraakiisheeda, ama dadka kale ee gaarka loo leeyahay, marka laga reebo in ururada loo idman doono oo awood loo siinayo inay bixiyaan magdhow macquul ah oo ku saabsan adeegyada la bixiyay iyo in la bixiyo lacag bixinno iyo qaybinta iyadoo la sii wado ujeeddooyinka ku xusan qaybta 1 ee halkan iyo qodobka __1__ ee dastuurkan.
Qaybta 3: Qayb muhiim ah oo ka mid ah howlaha ururka ma noqon doono qaadista dacaayadaha, ama haddii kale iskudayaya inay saameyn ku yeelato sharciga, ururkuna kama qeybgalayo, ama faragelin ku sameynayo (oo ay ku jiraan daabacaadda ama qeybinta qoraallada) wax olole siyaasadeed ah isagoo matalaya ama mucaarad u ah musharax kasta oo u taagan jago dowladeed.
Qaybta 4: Iyadoo aan loo eegin qodob kale oo ka mid ah qodobadan, ururku ma wadi doono waxqabadyo kale oo aan loo oggolaanayn in lagu fuliyo (a) hay'ad ka reebban cashuurta dakhliga federaalka sida ku cad qaybta 501 (c) (3) ee Dakhliga Gudaha Koodh, ama qaybta u dhiganta ee lambar kasta oo cashuur federaal ah ee mustaqbalka ah, ama (b) urur, tabarucaadyo laga jari karo sida ku cad qaybta 170 (c) (2) ee Xeerka Dakhliga Gudaha, ama qaybta u dhiganta ee cashuur federaal kasta oo mustaqbalka ah koodh
Qaybta 5: Markii la kala diro ururka, hantida waxaa loo qaybin doonaa hal ama in ka badan ujeedooyin laga dhaafo iyada oo loo marayo macnaha qaybta 501 (c) (3) ee Xeerka Dakhliga Gudaha, ama qaybta u dhiganta ee lambar kasta ee cashuurta federaalka mustaqbalka, ama waxaa loo qaybin doonaa dowladda federaalka, ama dowlad-goboleed ama dowlad hoose, ujeeddo guud awgeed. Hantidaas oo kale ee aan sidaa loo tuurin waxaa baabi'in doona Maxkamad awood u leh awooda maamulka degmada ee xafiiska guud ee ururku markaa ku yaalo, si gaar ah ujeeddooyinkaas oo kale ama urur ama ururro noocaas ah, sida ay sheegtay Maxkamadda ayaa go'aamin doonta, kaas oo loo abaabulay oo si gaar ah loogu shaqeeyay ujeeddooyinkan oo kale.